tips Ukuqeqesha for ojikelezayo Europe kubalulekile ukuba abahambi. Okokuqala, kukho izizathu ezininzi ezahlukeneyo eya eYurophu. Ungafuna ukubona iibhlorho ezintle, kwizikhululo zikaloliwe, and equally ezinobuhle obumangalisayo. Okanye mhlawumbi uhambela ukubona inkcubeko emangalisayo ElamaTaliyane. Kwelinye icala, ukuze ube kokuhamba ishishini. Okanye konke oku kungasentla kwaye wenze zombini ukhenketho lweshishini kunye nolonwabo – Nangona izizathu ukuhambela zisoloko ezahlukeneyo imfuneko tips and hacks lokuhamba kuhlala injalo.
Okokuqala, sukuyenza Impazamo yokuhamba rookie lokuzama ukubona yonke into eYurophu kuhambo olunye. Ngaphandle ukuba iYurophu inkulu kakhulu ukubona uhambo enye, imizi e Europe enkulu kakhulu ukubona uhambo enye. Kwinyani, kungcono ukukhetha ugxininiso kohambo lwakho uze unamathele kulo. Kwimeko ukuba uhambo lwakho lokuqala eYurophu, kufuneka uqwalasele i labantu ezifana France, ElamaTaliyane, Speyin, yaye Jemani .
Iingcebiso Uloliwe ngenxa kubhukishelwa phambili kukuba Not kubhukishelwa kuphela amatikiti ngaphambi kwexesha uya mali lingakwazi ukunceda ukuqinisekisa ukuba ebekelwe izihlalo for uhambo lwakho yonke. Xa ukukhanya amatikiti nokubhukisha kwangoko kokuba yinzuzo enkulu, sincoma nokuloga ngaphakathi ukubhukisha amatikiti ngokukhawuleza njengoko zibakhona (2-3 iinyanga ngaphambi uhambo). Ngaphezu, Ukucwangcisa uhambo lwakho lwexesha elingelolakho kunokuqinisekisa ukuthintela izihlwele kunye nokufumana amaxabiso angcono. Ukungachazi, ukuba kubhukishelwa ekuqaleni kunokukunceda uphephe izihlwele ezikhulu nofolo enkulu. Ngaphezu, ukuba incwadi ukuya ibheka kwabakhenkethi ngamaxesha xesha ephezulu Julayi / Agasti, you are less likely to encounter local people and more likely to be surrounded by tourists. So although you may still be able to see all the sights at these times you will miss out on the authentic experiences. Kwimeko apho uhamba njengesibini okanye kwiqela unganelungelo lokufumana amaxabiso ancitshisiweyo kwiihambo zakho. Kodwa khumbula ezi izaphulelo iya kuba semthethweni kuphela ukuba uhlale kunye njengoko isibini / iqela lonke ixesha i uhambo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-tips-hacks%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)